मानवता हराएको समाज, प्रेम गरेकै कारण नवराजले गुमाए ज्यान, नेपालि कलाकारहरु यसरि दुख पोखे – Everest Pati
मानवता हराएको समाज, प्रेम गरेकै कारण नवराजले गुमाए ज्यान, नेपालि कलाकारहरु यसरि दुख पोखे
अभिनेत्री केकी अधिकारी लेख्छिन्: ‘के फुर्ति लाउनु समाज भनेर ? यस्तो छ हाम्रो समाज । यो हो वास्तविकता हाम्रो । परिवर्तित समाज रे । खै जसको लागि परिवर्तन हुनुपर्ने हो उस्को लागि जस्ताको तस्तै छ, अझ ध्वस्त छ यो समाज । यही समाजको अंश भन्न नि लाज हुने । मानवता नभएको समाज । छि : !’
निर्देशक कलाकार निश्चल बस्नेंत लेख्छन्: ‘हामी चेतनसील प्राणी हौं भने आजैदेखि आफ्नो घरमा कुरा गरौं । कुरा गरौं, नामको पछी जोडिने जात को । जातले मानिसमा घृणाको बिऊ छर्छ भने यो पहिचान के काम को भयो । हामिले परिवर्तन गर्ने भनेको हाम्रो समयको समाज हो । मानिस भएर मानिसलाई नै तल्लो जात र माथील्लो जातमा तौलिने समाजले प्रगती गरेर के नै नाप्छ र ? मान्छेलाई जातले ठुलो सानो बनाउँदैन, उसको सोच, उसले गर्ने कर्मले देखाउँछ ।
अभिनेत्री बर्षा शिवाकोटी लेख्छिन्: विश्व भनिनै रहन्छ, जात, वर्ग, लिङ्ग केहीको भेद भाव छैन् । तर हामी त नेपाली होनि (एक्दम फरक) । शताब्दी भन्छ २१ चरणमा पो छौं । उहीलेको कुरा नगर, तर हामी नेपाली हो नि (एकदम फरक) । प्रेम भन्छ, म अन्धो छु, मन मात्र हेर्छु तर हामी नेपाली होनि, उपहार मा मृत्यु दिन्छौं (एक्दम फरक) । खै कहिलेसम्म नेपाली होनि भनेर गर्व गर्नु !! विरोध त सधै गरिन्छ तर यस्ता घटना पनि भैनैरहन्छ । के यो सबको अन्त्य कतै छ ?हृदय देखि प्रेम गर्नु अपराध हैन, हत्या गर्नु अपराध हो’
कलाकार दिपकराज गिरि लेख्छन्: कोरोना बाट बॉच्न के के उपाय गर्नु पर्छ त्यो त WHO , सरकार सबैले बताए!!! आजको यूगमा पनि दलितहरू प्रेम गरेको आरोपमा मारिदै छन् यस बाट बच्ने उपाय चाहि कस्ले बताउछ होला?
चीनको ऊहान ल्याबकी उप–निर्देशकको दिइन् चेतावनी,चमेरोमा कोरोनाभन्दा पनि खतरनाक भाइरस भेटियो, जुन फैलिन सक्छ’